Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiir... | Universal Somali TV
Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirka Sweden
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoontay Madaxtooyada Qaranka waxa uu kaga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirenimo Safiirka cusub ee Dowladda Sweden u soo magacawday Somaliya, Per Lindgarde.
Danjiraha Sweden oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda la wadaagay farriin iyo salaan uu uga siday Boqorka Sweden, Carl XVI Gustaf ayaa soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono adkaynta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal, isaga oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran.
Madaxweyne Farmaajo iyo Danjire Lindgarde ayaa ka wadahadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Somaliya iyo Sweden, kaas oo ku dhisan wax wada-qabsi iyo is ixtiraam, si loo adkeeyo iskaashiga dhinacyada amniga, gargaarka bani’aadannimada, dhaqaalaha, maalgashiga, horumarinta iyo arrimaha bulshada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Danjiraha cusub ee Sweden ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay, waxa uuna u sheegay in uu soo dhoweyn wanaagsan kala kulmi doono shacabka Soomaaliyeed, Dowladda Federaalkuna ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblumaasiyadeed ee loo soo igmaday.
Kan-xigaSenator Muuse Suudi oo mar kale loo d...
Kan-horeMidowga Musharaxiinta oo la kulmay Ra...
62,359,233 unique visits